शा’ रीरिक स,म्पर्क लामो समयसम्म कसरी राख्ने ? : जानीराखौ – Sandesh Press
शा८ रीरिक स८ म्पर्ककाे बारेमा प्राय गरेर सबैलाइ थाहा हुन्छ त्यसैले शा८ रीरिक स८ म्पर्कर्क क्रियाकलापकाे बारेमा धेरैका धेरैथरी मत छ । खासमा यो व्यक्तिको निजी मामिला पनि हो
तर, यहि विषयलाई लिएर व्यक्तिले धेरै टाउको दुखाईरहेको पाइन्छ । कि खासमा शा८ रीरिक क्रियाकलापमा सहभागी हुँदै गर्दा कति समयमा स्ख८ लन हुनु सामान्य हो भनेर । नेपालमा यसको अनुसन्धान भइसकेको छैन तर पश्चिमा देशमा भने यौ८ न क्रियाकलाप गरिरहेका पार्टनरबीचको सामान्य से८ क्स अवधी छुट्याएको छ ।
अमेरिकी र क्यानेडियन यौ८ न चिकित्सकहरुले गरेको अध्ययनले सामान्य अवस्थामा यौ८ न क्रियाकलापमा लिप्त भएका पार्टनरबीच ३ देखि १३ मिनेटसम्ममा सन्तुष्टी पाइसक्ने छन् । अर्थात ३ देखि १३ मिनेटको बीचमा उनीहरु स्ख८ लित भइसक्ने छन् ।
यो अध्ययनमा यौ८ न चिकित्सक, मनोचिकित्सक, फिजिसियन, सामाजिक कार्यकर्ता, निजी चिकित्सक तथा नर्सहरु गरी ५० जनालाई सहभागी गराईएको थियो । जसले हजारौँ विरामीहरुलाई दशौँ बर्ष देखि हेरिरहेको छ । र उनीहरुको यौ८ न क्रियाकलापबारे समेत बुझेको छ ।
उनीहरुका अनुसार समान्यत यौ८ न स८ म्पर्क शुरु गरेको व्यक्ति ३ देखि ७ मिनेट भित्रै स्ख८ लित हुनसक्छ । यो अवधीलाई उनीहरुले पर्याप्तता भनेका छन । त्यस्तै यौ८ न स८ म्पर्क शुरु भएको ७ देखि १३ मिनेटसम्म टिक्नेलाई अत्यन्त आनन्ददायी भनेका छन् ।
यदि कोही व्यक्तिले १ देखि २ मिनेट भित्र स्ख८ लित भयो भने त्यो अत्यन्तै छोटो अवधीको से८ क्स र १० देखि ३० मिनेटसम्म पनि स्ख’८ लित भएन भने त्यो अत्यन्तै लामो अवधीको भनेर उल्लेख गरेका छन् ।
Prev२४ घण्टाभित्र तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, फोटो छोई ॐ लेखि सेयर गरौं !!!
Nextपाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, कार्तिक ३० गते मंगलबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
पक्राउ गर्न पल शाह नभेटीएपछि प्रहरीले गर्यो यस्तो आशंका
नायक पल साह र समिक्षा को भेट भयो?? पल अब छुट्दै?? हेर्नुहोस भिडियो
सिद्धार्थलाई बिदाइ गर्न अस्वास्थ्य अवस्थामा आइपुगिन् प्रेमिका शहनाज
राति सुत्दा भान्सा कोठामा भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती, नत्र हुन्छ धन हानी